Naqshadeynta vs Naqshadeynta Emailka Moobilka | Martech Zone
Naqshadeynta vs Naqshadeynta Emailka Moobilka
Jimco, Juun 21, 2013 Arbacada, Juun 19, 2013 Douglas Karr
Yesmail Interactive wuxuu daabacay warqad cad oo cinwaankeedu yahay, Naqshadaynta Emailka Moobaylka — Ku habboon Suuqgeynta shaashadda Yar Yar ee daaqad cusub, ku dhawaaqista in ka badan boqolkiiba 36 emailada waxaa lagu furay aaladda mobilada, taas oo la saadaalinayo inay sii socon doonto sanadba sanadka ka dambeeya.
Maaddaama macaamiisha ay sii wadaan inay u jeestaan ​​aaladooda moobaylka si ay u hubiyaan emaylka, waxaa ka sii muhiimsan sidii hore in magacyadu ay u yeelaan wicitaanno ficil fudud oo la raaco. Nasiib darrose, boqolkiiba 76 noocyadu waxay kaliya bixiyaan istiraatiijiyad mobiil aasaasi ah - ama aanad midna lahayn.
Tani waxay caqabad ku noqoneysaa macaamiisha inay ku lug yeeshaan waxyaabaha ku jira calaamadda ama sameynta macaamil ganacsi sababtoo ah ku dhowaad nus ka mid ah waxay yiraahdaan emayllada moobiilku way adagtahay in la akhriyo sababtoo ah wareejinta xad-dhaafka ah iyo boqolkiiba 29 waxay tilmaamayaan qaabab khaldan ee shaashadooda moobiilka.
Si loo hubiyo in macaamiisha ay la falgeli karaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin, magacyadu waa inay adeegsadaan qaab isku dhafan oo leh labadaba naqshad wax ku ool ah iyo mid la qiyaasi karo. Faa'iidooyinka ugu muhiimsan waa:
Astaan ​​ka weyn oo dib ugu laabo websaydhka.
Wareeg ballaaran iyo sidaas darteed qiimeyn-riix
Kordhinta diiradda lasaaray waxyaabaha kujira muuqaalka
Qoraal balaaran iyo baaqyo ficil ah
Baaxadda ka-qaybgalka moobiilku wuxuu u baahan yahay suuqleyda inay u sameeyaan wicitaanno ficil fudud oo lagu raaco shaashadaha moobiilka. Adeegsiga, caddaynta iyo khibradda sumadeed ee wanaagsan ee laga helay naqshadaha emaylka ee jawaabta iyo cabirka leh ayaa ku dhiirrigeliya macaamiisha inay is-qoraan oo ay si joogto ah ula falgalaan barnaamijka iimaylka sumadda.
Tags: emailnaqshadeynta emaylkaemaylka gacantanaqshadda emaylka gacantaemaylka jawaabta lehemaylka la qaadi karo
Waxyaabaha laga Filayo Maalgashiga Suuqgeyntaada
Tilmaamaha iyo Halbeegyada Raadinta Google
Nov 6, 2013 saacadu markay tahay 5:02 PM
Kheyraad ka baxsan Hub Aqoonta Naqshadaysan. Halkan ka eeg: http://goo.gl/7S6pye
Jun 10, 2014 saacadu markay ahayd 11:46 AM
Waa hubaal in dad badani ku jahwareersan yihiin waxa aan la aqbali karin iyo waxa la aqbali karo marka ay akhriyaan mawduuca emaylka. Furaha emayl badan oo la qaadi karo ayaa ah iyada oo ka dhigaysa mid xirfad leh.